China akpọre Mattress Manufacturers | RAYSON
Ulo > Ngwaahịa > Okpokoro Mattress
Rayson Rolled Mattress bụ akwa a na-ejikarị eme ihe eji arụ ọrụ nke ọma na arụmọrụ ka mma, na isi ọdụ mmiri ya bụ isi iyi. Ihe eji ehi ụra nwere uru nke ịdị mma dị mma, arụmọrụ ka mma na-akwado ya, ikuku ikuku ike, na ogologo oge. Akụkụ nkewa nke atọ nwere nkewapụta onwe ya emere n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ergonomic nwere ike ime ka ọ gbasaa ma kwekọọ na nkwekọ na ịdị arọ nke ahụ mmadụ.
Ndị na-emepụta ọkachamara Coil Spring Mattress
Rayson na mpaghara Rayson Industrial, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Isi ihe eji emeputa ihe eji emeputa ihe omumu. Coil Spring Mattress Rayson Spring Mattress Manufacturer na-agba mbọ imepụta ụdị ọhụụ. Coil Spring Mattress A na-achịkwa njikwa mma nke Rayson. Ọ na - ekpuchi ngwa nke aluminom, ịdị arọ nke usoro, ọnụego ya, ụda ọkụ nchekwa na ihe ndị ọzọ.
Ohiri isi kachasị mma n’elu bonnell mmiri matarasị na-eweta
Rayson na mpaghara Rayson Industrial, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Isi ngwaahịa kacha mma ohiri isi n'elu bonnell mmiri matraasi Olu. Ohiri isi matarasị mmiri nke akụrụngwa Ngwa a na-eji Rayson sitere na isi mmalite. Ndị otu anyị nwere ikike imepụta ihe ọhụrụ, na-ejide n'aka na Rayson anyị nwere ụdị ọhụụ dị iche iche, na-atọ ụtọ ma na-arụ ọrụ. ohiri isi elu Bonnell mmiri matraasi Ejiri ngwaahịa a n'ọtụtụ ngwa maka ike iwepụ ngwa ngwa ya. Ọ bara uru karịchaa mgbe isi ike dị nwa oge.